Author: Bazuru Tami
Yuusuf Dhegey gabaysda. Badanaa, gabayada, geeraarrada iyo masafooyinka qoraalladaan ku xusani ma dhammaystirna. Wuxuu haddaba isugu yeedhay abwaano dhawr ah oo inay gabyaan amar ku siiyey, gabayadaa oo ay ku raad-goobayaan midnimada qooyskooda. Qarnigii 14aad waayihii uu noolaa ANU Sheekh Cabdiraxmaan Saylici, waayihii dhexe ee Suldaan Diiriye oo ku beegan qarnigii ay noolaayeen aabayaashii Raage Ugaas, Wiilwaal iyo ragii ay isku waqtiga ahaayeen oo haatan laga joogo labo qarni iyo bar ama yadii, ayaa hobolada ku caan baxay suugaanta iyo maansada noocyadeeda kale duwan sida gabay, geeraar oo faraca sare waxaa soo bilowda diiwaanka magacyada la yaqaan soomaalia ama abwaanadaas caanka ah.
Maxamed Rooble Marxuum Sh. Iyo qaar kaloo badan, Waxaa sidoo kale hadda soo baxay Webab daneeyay gabayada soomaaluda sugaanta Soomaaliya. Halqabsi iyo odhaahyo badan oo maanta bulshada dhexdeeda caan ku ah ayaa waxay ka. Deelqaafka iyo gebidhacu saw gabayga cadowgii ma ahaan jirin. Labadaa nin oo midkood walba af-hayeen u ahaa qoyskiisa waxay is dhaafsan jireen gabayo badan.
Abwaan Cabdullaahi Dhoodaan oo mudo dheerba mucaarad ku ahaa dowladii Maxamed Siyaad, gabayo badan oo gabyaada ahna ooda kaga qaaday ayaa cajaladii loo geeyey isagoo jooga Diri Dhaba. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Waxaa ka mid ahaa beydadkii ay isdhaafsadeen: Muxuu yahay dowrka ciidammada badda Jabuuti ee xeebaha Soomaaliya? Aniguna kama diidine, waan ka yeelay.
Shanta beyd ee xigta ee ay abwaaniinta kale Falastiin kaga hadleen wuxuu Dhoodaan kaga jawaabay 10 kan hoose.
Xarbi Ismaaciil ayaa bari gabay digasho ah dhinaca Qawdhan iyo qoykiisa u diray. Maxamuud Cali Beenaleey wuxuu tiriyey gabay dheer oo kusoo caano shubtay beydadkan hoose: Waa kaligii taliye iyo gaddiisiiye, wuxuu damcay inuu shacbiga Soomaaliyeed isku mashquuliyo oo uu dabadeed soomaailda dhex ku bari noqdo.
Diiwaanka abwaanada Soomaaliyeed hobalada ku jira waxay ku caan yihiin maansada nooceeda culus ee gabayga ah. Waxay ahayd silsilad dawladii Maxamed Siyaad mucaarad ku ahayd. Ninkaa dambe waxaa magac ugu baxaa beyd gaab iyo goray ciil, waxaana lala mataaniyaa macallin qoryaale iyo kitaab gaab aan Todobada Mingaliyo iyo Suddamada dhinacna u dhaafin. Suuragal ma Ahan in Xamar Xubno loo Raadiyo. Dadka Guba silsilladan ugu soomazlida waxay maqleen beydkii Qamaan ee ahaa: Aad kasta oo ay u furan tahay halabuurka inuu badda maansada ee la isku harqinayo is daadraaciyo, haddana waxay u badan tahay inay abwaanadu kolba say ugu kala ehelsanyihiin u jawaabaan.
Waxaa ka mid ahaa: Qormadan waxaan ku dulmari doonaa gabayada taxanaha noqda ee labo gabayaa ama ka badan ay ka qeyb qaataan iyaga oo istixraacaya, gundhacooduna u noqonayo hal dhacdo ama mawduuc.
Qodobkan ayaan ku faahfaahinay waxtarka Herbalife. Ha yeeshee, waxaan isku dayey akhristaha inaan farta ugu fiiqo buugga, iyaga oo dhammaystiran, ay markoodii horeba ku soo baxeen, haddiiba buug ay ku soo baxeeni uu jiro. Wuxuu si dhaxal gal ah u difaacay Soomaalida kale ee nimanka gabyey ku xadgudbeen.
Silsilad walba ragga isagu dhibidhacsada ayey la heer tahay oo ay aragtidooda iyo garaadkooda suugaaneed ka tarjuntaa. Babayada kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare, bulshada Soomaali waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed iyada oo loogu magac daray Qarankii Gabayada.
Nin reer miyi ah oo xafidsan gabay – BBC News Somali
Orda oo waxaad doontaan soo dira ayuu Camanje isku koobay. Diiwaanka Abwaanada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaan, walow diiwaano qoraal jiraan taxa ilaa 70 hobal oo caanah, waxaa safka hore kaga jira raga ay ka midka yihiin Garaad Faarax Garaad oo loo yaqaan Wiilwaal iyo dadkii isku waqtiga ay ahaayeen sida abwaanka caanka ah ee:.
Bal u fiirso, Yamyam oo ahaa ninkii afraad ee heesa ayaa xataa ku wareersan ujeedadii Deelleey ee sida raadka gaadhiga dhinac walba u jeeday. Waxay ka billaabatay Gabayxda Soomaaliya, waxaana billaaby Cali Sharmarke.
Waxay ku faanaan hebelada ay ku aragtida yihiin mawqifkoodana u dooday, kuwa kasoo horjeedayna dhaliilo ayey huwiyaan. Ergo Daarood ayey wadajir ugu yeedheen gabayadaas. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Gabay kasta oo abwaanku unko waxaa ku xambaara gabaydaa ama sabab gooni ah.
Dharbaaxo Jin wuxuu gabay-hayeen u ahaa Soomaalida inteeda kale Khaliifna qoyskiisa. Aduunka suugaanta daabacan, gaar ahaan maansada; Carab ayaa leh suugaanta ugu fac wayn aduunka iyada oo noocyo badan oo kala duwan ay jirto suugaanta Carbeed.
Silsiladdani waxay u dhaxaysay niman xayndaab hoose wadaaga oo ugaaskii u arimin jiray iyo xukunkiisii la isku maandhaafay, dabadeed rag la kala soomazlida iyo aragtiyo is dabamarsan gabayo badan laga tiriyey.
Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo isaga la dhex marin, gabaygan uu Maxamed ugu jawaabayna wuxuu arkayey inuu kaga haboonaan lahaa inuu Cali jawaab u noqdo marka uu mid kale soo celiyo. Duraaqsaygii Dhoodaan ee Ergo Daarood jawaabta u ahaa waxaa ka mid ahaa beydadkan hoose.
Dubaaqiinu sidee arintaa u yeelay. Mudo sano ah ayaa ka soo wareegtay markii gabay loo gabayad meeriksa ‘hooyaalayeey’ iyada oo uu Raage Ugaas Warfaa lahaa gabaygaas. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Cabdigiir Caliganay kr.
Wuxuu ka dhawray qadaf, beyd dalab leh, iyo wax kasta oo anshaxa iyo dhadhanka gabayga dili kara, islamarkaana wuxuu nimankii u raddiyey si aysan kasoo waaqsan karin. Waxay dhexmartay laba qoys oo Ogaadeen ah sida cinwaankaba ka muuqata, waxayna socotay muddo dheer. Halqabsi iyo odhaahyo badan oo maanta bulshada dhexdeeda caan ku ah ayaa waxay ka baxeen gabayo taxane gabayasa.
Qawdhan ayaa gabaygii dhibsaday oo tix kaga soo jawaabay.